Iindaba-Uwenza njani umboniso wakho opholileyo usebenze kakuhle?
Usenza njani isibonisi sakho ukuba sipholile sisebenze kakuhle?
1. Nika ingqalelo kubushushu obuhlukeneyo bokusetyenziswa kweekhabhathi zokubonisa ukwahlukanisa
2. Ukutya okukhenkcezisiweyo akukwazi ukugcinwa efrijini, kwaye ukutya okubandayo okufana nesiselo akukwazi ukufakwa kwisikhenkcisi, ukuze kungagqabhuki ngomkhenkce.
3. Impahla kwikhabhinethi yokubonisa i-insulation kufuneka ithengiswe ngokukhawuleza, kwaye akufanelekanga ukuba ifriji.
4, kufuneka kubekho umsantsa othile phakathi kokutya ukuququzelela umjikelo obandayo
5. Awukwazi ukubeka ukutya ngaphezu kobushushu bekhabhathi kwikhabhathi yokubonisa
6. Ukusetyenziswa kokutya okwahlukileyo kohlulwe kwibhaskithi okanye ukwahlula isithuba esikhulu
7. Ukutya kwikhabhinethi akufuneki kudlule umgca womthwalo womthwalo
8. Musa ukupakisha ukutya kufutshane nomoya kwaye ubuyisele umoya
9. Xa kungekho shishini evenkileni, kufuneka ugubungele ikhava yasebusuku.
10. Ukupakishwa kokutya kwikhabhinethi kufuneka kube kuhle, ngaphandle koko kulula kakhulu ukungcolisa iindawo, kwaye kubangele iimpazamo.
Nayiphi na ikhabhinethi yokubonisa kufuneka isetyenziswe kangangoko ukuze akhonze ngcono ubomi bethu.Nje ukuba ungapholi, okanye ukuba kukho isandi esingaqhelekanga, nceda ulandele la manyathelo angezantsi.
Khangela ukuba udibaniso lwamandla luqhelekile.Vula umnyango, jonga ukuba ukukhanya kwibhokisi kukhanyisiwe, okanye ukuvavanya ngepeni yombane.
Okanye lungisa isikrufu salo mbhobho sikhulule
1 ityhubhu ye-buffer ye-voltage ephezulu kwicompressor.Ibangela ityhubhu yoxinzelelo oluphezulu ngaphandle kokuphuma, ityhubhu yoxinzelelo oluphantsi ayifakwanga, ngoko ke i-compressor iyasebenza, kodwa ayifaki efrijini.
Isikhenkcezisi siphuma kwicompressor nangona icompressor iyasebenza.
2. Ukuvuza kwenkqubo yefriji.Nangona kunjalo, akukho sikhenkcezisi kwinkqubo yokukhupha ubushushu, ngoko ke izinga lokushisa kwifriji alinciphisi.Isikhenkcisi asinakungena kwi-evaporator ukuze sikhuphe ubushushu,
3. Ukuthintela kwi-capillary.Ubushushu kwifriji ayinciphisi.
Faka esikhundleni ityhubhu yesithinteli,
nqumla i-casing.Okanye gcina izikrufu.Welder, uvavanyo, kwaye uthathe ulawulo
Okokuqala jonga indawo yokuvuza kwenkqubo.Yongeza ifriji kubuninzi, ngokuqhelekileyo izinga lokushisa elilinganisiweyo lifikelelwa kwiqabaka okanye kwisikhenkcisi se-evaporator.